Marco Reus Ayaa U Eeg Mid Aan Wali Lucien Favre Tababaraha Kooxda Borussia Dortmund Ka Quusan? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababaraha kooxda Borussia Dortmund Lucien Favre ayaan ka quusan doonin Marco Reus inuu mar kale ciyaaro xilli ciyaareedkan inkasta oo ay jiraan warar sheegaya in ololihiisii ​​xilli ciyaareedkii 2019-20 uu durbaba dhammaaday.
Reus wuxuu dhaawac ka soo gaadhay gumaarka intii lagu jiray kulankii DFB-Pokal bishii Febraayo, inkasta oo loo maleynayay kaliya inuu bil garoomada ka maqnaan doono, 30 jirka ayaa weli awoodi waayey inuu ku soo laabto tababarka buuxa.
Waxaa la soo wariyay horaantii isbuuca in Reus inuu si rasmi ah u seegi doono kulanka Talaadada soo socota ee Klassiker ee ay la ciyaarayaan Bayern Munich, maqnaanshaha ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka ayaa macquul ah.
Favre, oo hadlay ka hor safarka sabtida ee Wolfsburg, ayaa diiday inuu si furan u cadeeyo ama ka hor imaado sheegashadaas, inkastoo uu u muuqday mid rajo ka qaba in Reus uu mar kale kasoo muuqdo xilli Dortmund ay tartan ugu jirto hanashada Bundesliga.
“Wali wax tababar ah lama uusan qaadin kooxda, Waxaan rajeyneynaa inuu soo laabto sida ugu dhaqsaha badan uguna caawin karto ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.” ayuu Favre u sheegay suxufiyiinta.
Waxaa jiray war wanaagsan oo ku saabsan Emre Can iyo Giovanni Reyna. Labada xiddig ee qadka dhexe ayaa seegay kulankii ay 4-0 kaga badiyeen Schalke iyadoo Dortmund ay dib u bilaabatay xilli ciyaareedkeedii Sabtida, waxaana la filayaa inay ku lug lahaadaan tababarka kooxda jimcaha.
Dortmund waxaa ku dhacay dhaawacyo badan oo waqti dambe ah, iyadoo Axel Witsel uu weli dhaawac muruqa ah ku maqan yahay halka Dan-Axel Zagadou uu muddo dheer maqnaanayo dhaawac jilibka ah, laakiin Favre wuxuu dareensan yahay in arrimahan oo kale la filan lahaa ka dib markii uu ku dhacay coronavirus- hakinta la xoojiyey.
Waxaan marka hore ku tababarnay laba labo, kadibna kooxo afar ah. Khatar ayaa jirta, “ayuu yidhi. “Dhamaanteen tababar ma aanan tababarnay ka dib waana qasab inaan tababar si sax ah u qaadno afar ama shan maalmood ka hor ciyaarta horyaalnimada, taas lama yaabin aniga ahaan.